पुरुष मारियास। पछिल्लो डोभ | को लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
पुरुष मारियास गत मेले आफ्नो पछिल्लो उपन्यास शीर्षक प्रकाशित गरे अन्तिम कबूतर। पुरुषको पछाडि रहेको कारमेन सलिनास ग्रेनाडाकी हुन् र उनले २०१ut मा कारमेन मार्टेन गायइट उपन्यास पुरस्कार २०१ deb मा जितेका थिए। Pukata, माछा र समुद्री खाना। म धेरै धेरै धन्यवाद! समय र ध्यान मलाई दिन को लागी समर्पित यो अन्तर्वार्ता जहाँ उसले हामीलाई यो नयाँ कामको बारेमा बताउँदछ र थोरै भन्दा माथि।
पुरुष मारियास - अन्तर्वार्ता
साहित्य वर्तमान: The अन्तिम कबूतर यो तपाईको नयाँ उपन्यास हो। तपाईं हामीलाई यसको बारेमा के बताउनुहुन्छ र विचार कहाँबाट आयो?
MEN MARÍAS: Andalusia यो सधैं उत्पत्ति थियो। उनको अनमास्क गर्न आवश्यक छ। र यो यो हो कि अन्डालुसिया असल हत्याराहरू जत्तिकै छ: ​​कसैले पनि यसलाई श suspect्का गर्दैन। कसले ज्योति अविश्वास गर्न सक्छ? यो छाया हो जुन हामीलाई डराउँछ। तर त्यस्ता स्पष्टताको पछाडि धेरै कल्पित कथाहरू छन्। धेरै अँध्यारो। धेरै राम्रो लुकाइएको। के सन् १ 50 .० को दशकमा रोटामा अमेरिकीहरूको आगमन.
दक्षिणी स्पेनको हराएको सहर रोटाले केवल चारवटा सडकहरू मात्र थिए जहाँ गधाहरू भरिएका थिए र त्यहाँ गन्धनले भरिएका पानीहरू थिए, जहाँ इनारबाट पानी आयो र त्यहाँ बिजुली थिएन, अचानक संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसैनिक आधारको मागलाई स्वागत गरे। , रोलिंग स्टोन्स, कोका कोला र मिकी माउस। अमेरिकीहरू महिनौं पछि समुद्रको मुनि आफ्नो जेब लिएर पैसा लिएर आएका थिए र भोजमा उत्सुक थिए। सबै कुरा हल्का, रंग, संगीत ... र गायब थिए। महिलाहरू दिनहुँ बेपत्ता भए र कसैले पनि उनलाई अनुसन्धान गरेनन्। ती मध्ये एक Inés थियो, आज युवती डायना खोज्दै थिईन्। तर त्यो खोजी निराश भएको छ किनभने डायना क्रूर रूपमा विकृत नौसेना बेसको अगाडि देखा पर्दछ र विशाल पखेटा उनको पछाडि सिलाइएको छ।
MM: इमान्दार हुनको लागि मैले पढेको पहिलो पुस्तक मलाई याद छैन। मलाई पहिलो याद आयो जुन मलाई वास्तवमै प्रभावित भयो। यसरी Zarathustra बोले, को नीत्शे, जुन म एघार वा बाह्र मा मा दौडें। पहिलो कथा हो, पक्कै पनि। मलाई लाग्छ कि मैले मेरो जीवन भर उही कथा लेखिरहेछुः यस्तो महिलाको जुन उनले विश्वमा आफ्नो स्थान पाउन सकेन।
MM: मेरो टाउको लेखक हो Dostoyevskyकुनै श doubt्का बिना, तर त्यहाँ अरू धेरै छन् जुन मैले हाईलाईट गर्दछु: क्यामस, म्याक्स अउब, क्लारन, लोर्का, पेसोआ, थोरो, ज्वेइग ... वर्तमान साहित्यिक दृश्यको सन्दर्भमा, रूख को विक्टर यो कुनै पनी दोस्रो छैन।
MM: अना ओजोरस, रेजेन्टा, उपन्यासबाट उही नाम बोक्दछ। उहाँ मलाई साहित्यको इतिहासको सबैभन्दा मनमोहक पात्र भएको जस्तो देखिन्छ र मलाई गर्व छ कि उनी स्पेनबाट आएका हुन्।
MM: ठाउँ एकदम सफा र सफा हुनुपर्छ। म गडबडीको बीचमा काम गर्दिन, म ब्लक गर्छु, म स्पष्टसँग सोच्दिन।
MM: La रातनिस्सन्देह। केहि रातमा भूतहरूको घर हुन्छ। र साहित्यले यसको बारेमा धेरै जान्दछ।
MM: त्यहाँ कुनै विधा छैन जुन मलाई मनपर्दैन। लि .्ग मात्र र color्ग बक्स हो कालो, गुलाबी, पहेंलो ... के महत्त्वपूर्ण छ यो भित्र के छ।
MM: मैले एकै साथ धेरै पुस्तकहरू पढें। अहिले म संग छु प्वाल, बर्ना गोन्जालेज हार्बरको अन्तिम; मायाकोभस्कीको नृविज्ञान; कला को काम को रहस्य, गुलाब-मैरी र रेनर हेगेन र द्वारा भाय्योरको मोटेल, तल्से द्वारा म सबैलाई सिफारिस गर्दछु।
MM: जटिल। यो जटिल छ, यो निर्विवाद छ। त्यहाँ उच्च श्रेणीका लेखकहरू छन् जुन सब भन्दा रमाईलो प्लटमा उनीहरूको पुस्तकहरू बजारमा विश्राम बिना सुरू गर्दछन्। पाठकको प्रस्ताव विशाल छ। म एउटा प्वाल बनाउने आशा गर्दछु उनीहरू बीच र ती मेरा उपन्यासहरूले पनि मानिसहरूलाई रमाइलो गर्न सक्छन्। हुनसक्छ उनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्, जसरी अन्य पुस्तकहरूले मलाई सहयोग गरेको छ। त्यो उत्तम हुनेछ। यही कारणले गर्दा मलाई प्रकाशित हुन पुग्नुभयो: पुस्तकहरूले मलाई यति धेरै, यति धेरै चीज दिएका छन कि यदि यदि मैले अन्य लेखकहरूले मेरो लागि के गरे भने म जीवनबाट सन्तुष्ट हुनेछु। शान्तमा।
MM: यो सम्पूर्ण दुःस्वप्नले सबैलाई चोट पुर्यायो, अपवाद बाहेक, र मलाई लाग्छ म भविष्यमा यसको बारेमा लेख्नेछु। तर यो अझै आराम गर्न छ। चीजहरू हाम्रो क्षणमा बुझिएन तर तपाईंकोमा र यस अवस्थामा, हामीलाई के भयो भनेर विचार गर्न अझै धेरै बाँकी छ। एक विवरण खोज्नको लागि, यसलाई स्वीकार गर्न एउटा तरिका।
प्याराडिग्म परिवर्तनहरूले किन यसको पालना गर्नुपर्दछ, हामी त्यो तरीकाले काम गर्छौं। हामीलाई बसोबास गर्न यी सबैको आवश्यकता छ। एकपटक मैले गरेको छु कि म पक्का छु कला यसको व्याख्या गर्न कोशिस गर्दछ। सधैं हुन्छ। त्यो कलाको लागि हो। आशा छ कि म मेरो बिट योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। र आशा छ यो सबै चाँडै समाप्त हुन्छ। "चाँडै" हाम्रो समयको अवधारणा अनुसार इतिहासको अनुसार होईन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » पुरुष मारियास। पछिल्लो डोभका लेखकसँग अन्तर्वार्ता